Marketing eo akaiky: Inona izany? Karazana inona?
Raha vantany vao miditra ao amin'ny rojo Kroger (fivarotana lehibe) eo an-toerana aho dia mijery ny findaiko ary manaitra ahy ny app izay ahafahako mipoitra ny kaody Kroger Savings hanamarinana na afaka manokatra ny rindranasa hikarohana sy hahita zavatra ao ny lalantsara. Rehefa mitsidika fivarotana Verizon aho dia manaitra ahy amin'ny alàlan'ny rohy mankany amin'ny fisavana ny app raha vao mivoaka ny fiara aho.
Ireo dia ohatra roa lehibe amin'ny fanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa miorina amin'ny hyperlocal mitarika. Ny indostria dia fantatra amin'ny hoe Marketing eo akaiky.
Tsy indostria kely io, andrasana hitombo hatrany amin'ny $ 52.46 miliara USD amin'ny 2022 araka ny MarketsandMarkets.
Inona ny atao hoe Marketing Proximity?
Ny marketing proximity dia rafitra rehetra mampiasa teknolojia toerana hifandraisana mivantana amin'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fitaovany finday. Ny marketing akaiky dia afaka mampiditra tolotra dokam-barotra, hafatra ara-barotra, fanohanan'ny mpanjifa, ary fandaharam-potoana, na tetikady fifanarahana hafa marobe eo amin'ny mpampiasa finday sy ny toerana akaikin'izy ireo akaiky.
Ny fampiasana marketing eo akaiky dia misy ny fizarana haino aman-jery amin'ny kaonseritra, fampahalalana, lalao, ary fampiharana ara-tsosialy, fizahana antsinjarany, vavahady fandoavam-bola, ary dokam-barotra eo an-toerana.
Ny marketing akaiky dia tsy teknolojia tokana, azo ampiharina amin'ny fomba maro samihafa. Ary tsy voafetra amin'ny fampiasana smartphone fotsiny izy io. Ny solosaina finday maoderina izay alefa amin'ny GPS dia azo kendrena amin'ny alàlan'ny haitao akaiky ihany koa.
NFC - Ny toerana misy ny telefaona dia mety ho faritan'ny serasera akaiky (NFC) alefa amin'ny telefaona mifandray amin'ny chip RFID amin'ny vokatra na media. NFC no teknolojia naparitaka ho an'ny Apple Pay sy ireo haitao fandoavam-bola hafa saingy tsy tokony hoferana amin'ny fandoavam-bola fotsiny izany. Ny tranombakoka sy tsangambato, ohatra, dia afaka mametraka fitaovana NFC hanomezana mombamomba ny fizahantany. Ireo fivarotana antsinjarany dia afaka mametraka ny NFC amin'ny talantalana ho fampahalalana momba ny vokatra. Misy tombony lehibe amin'ny marketing miaraka amin'ny teknolojia NFC.
Geofencing - Rehefa mifindra amin'ny findainao ianao dia voatazona eo anelanelan'ny tilikambo ny fifandraisanao amin'ny sela. Ny rafi-barotra amin'ny hafatra an-tsoratra dia afaka mampiasa ny toerana misy anao handefasana hafatra an-tsoratra amin'ireo fitaovana ao anatin'ny faritra voafaritra ihany. Fantatra amin'ny hoe SMS Geofencing. Tsy teknolojia marina izy io, fa mety hahasoa kosa raha azo antoka fa halefa amin'ny mpihaino kendrena ilainao amin'ny fotoana tadiavinao ny hafatrao.
Bluetooth - Afaka mampiasa ny toerana fivarotana loharanom afaka mifandray amin'ny finday avo lenta. Matetika misy rindranasa finday ahafahana manome ny teknolojia ary angatahana alalana. Azonao atao ny manosika ny atiny amin'ny alàlan'ny Bluetooth, manompo tranokala eo an-toerana amin'ny WiFi, mampiasa ny fanilo ho toy ny fidirana amin'ny Internet, mihetsika amin'ny vavahady Captive, manolotra serivisy mifandraika, ary miasa tsy misy fifandraisana Internet.
RFID - Misy teknolojia isan-karazany izay mampiasa onja onjam-peo hahafantarana zavatra na olona. Ny RFID dia miasa amin'ny fitehirizana laharana laharana ao amin'ilay fitaovana izay mamaritra zavatra na olona iray. Ity fampahalalana ity dia ampidirina amin'ny microchip izay miraikitra amin'ny antena. Antsoina hoe tag RFID io. Ny chip dia mamindra ny mombamomba ny ID amin'ny mpamaky.
ID akaiky - Ireo dia karatra akaiky na karapanondro tsy mifandray. Ireo karatra ireo dia mampiasa antena voapetraka hifandraisana amin'ny mpandray lavitra ao anaty santimetatra vitsivitsy. Ny karatra akaiky dia fitaovana vakiana fotsiny ary ampiasaina indrindra ho karatra fiarovana hahazoana fidirana am-baravarana. Ireo karatra ireo dia afaka mitazona fampahalalana voafetra.
Ireo orinasa maniry hampivelatra ireo sehatra ireo dia mampiasa rindranasa finday izay mifamatotra, miaraka amin'ny alalana, amin'ny toerana misy ny jeografika an'ny fitaovana finday. Rehefa tafiditra ao anatin'ny toerana jeografika manokana ny rindranasa finday, dia afaka manondro ny toerana misy azy ireo ny teknolojia Bluetooth na NFC.
Ny marketing akaiky dia tsy mitaky fampiharana lafo vidy sy haitao geocentric foana
Raha te hanararaotra ny varotra akaiky ianao raha tsy misy ny teknolojia rehetra… azonao atao!
QR Codes - Azonao atao ny mampiseho ny signage amin'ny toerana manokana misy kaody QR eo aminy. Rehefa mampiasa ny findain'izy ireo ny mpitsidika mba hanaraha-maso ny kaody QR, fantatrao tsara ny toerana misy azy ireo, afaka mandefa hafatra momba ny varotra mifandraika amin'izany, ary mijery ny fihetsik'izy ireo.
Wi-Fi Hotspot - Azonao atao ny manolotra tobim-pandraisana wifi maimaim-poana. Raha efa niditra an-tserasera amin'ny fifandraisan'ny seranam-piaramanidina na koa ny Starbucks ianao dia nahita maso ny atiny ara-barotra mavesatra izay natosika mivantana tamin'ny mpampiasa tamin'ny alàlan'ny tranokala.
Detection Browser finday - Ampidiro anaty tranokalan'ny orinasanao ny geolocation hahitanao ny olona mampiasa Mobile Browser eo amin'ny toeranao. Azonao atao ny manetsika popup na mampiasa votoaty mavitrika hikendrena an'io olona io - na ao amin'ny Wifi misy azy ireo na tsia. Ny hany maharatsy an'io dia angatahana alalana alohan'ny mpampiasa.
Loan-tsafidy dia namolavola ity sary ity ho topy maso ny Proximity Marketing ho an'ny orinasa kely sy salantsalany (SME):
Tags: FaniloBluetoothmarketing amin'ny Bluetoothindram-bola indroageofencinghoperlocalizationmarketing amin'ny toerana mafanahyper-localizationhyperlocalvarotra hyperlocalibeaconorinasa antononyfitetezana findayfifandraisana akaiky eny an-tsahanfcmarketing eo akaikystatistikan'ny varotra akaikyQR Codesorinasa kely sy salantsalanyfandraharahana madinikaorinasa madinika sy salantsalanyinona ny marketing akaikyWifi hotspot
Marketing any an-toerana: Geo-Fencing ary Fanilo
4 Feb 2016 tamin'ny 9:30 maraina
Vahaolana ara-barotra mifototra amin'ny akaiky, dia afaka manome ny mpanjifanao izany traikefa fiantsenana manokana sy tsy manam-paharoa
Febroary 19, 2016 amin'ny 5:40 PM
Blaogy mahafinaritra misaotra amin'ny fitanisana ireo safidy samihafa. Nanontany tena aho hoe ahoana no nilalao tao amin'io toerana io. Fantatrao ve hoe aiza no ahitako lisitry ny manfucaturers teknolojia Proximity Marketing ambony? Mitady manokana ny teknolojia Bluetooth aho.
Mar 25, 2016 amin'ny 3: 45 AM